စိတ်ညစ်တိုင်း အစားတွေချည်း လှိမ့်စားတတ်သော မမထံသို့ပေးစာ။ – For her myanmar
စိတ်ညစ်တိုင်း အစားတွေချည်း လှိမ့်စားတတ်သော မမထံသို့ပေးစာ။
Posted on May 15, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
ဖွတ်မရ ဓားမဆုံးအကွက်တွေ ဖြစ်ကုန်မယ်နော်… သိဘို့။
‘ငါ့အိုပါးရည်းစားရသွားပြီ အမလေး အဟင့်ရွတ်’
အသံပြဲကြီးနဲ့အော်နေလို့ သူ့လက်ထဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဟင်… အာလူးကြော်နှစ်ထုပ်၊ ရေခဲမုန့်ဘူးကြီးတစ်ဘူးနဲ့ ကိုလာတစ်ဘူးကို ဘယ်ညာညှပ်ပြီး စိန်ပြေနပြေတွယ်နေပါ့လား။
‘ဟဲ့ နင်ဘာကြည့်တာလဲ။ ငါ ဒီမှာဝမ်းနည်းလွန်းလို့ အစားနဲ့ဖြေသိမ့်နေရတာ’
သြော် အင်းပါပေါ့။ ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်နေတဲ့အချိန် ရုတ်တရက် ‘အားးးးး’ ဆိုတဲ့ အသံနက်ကြီးကြားလိုက်လို့ ပြေးကြည့်တဲ့အခါ…
‘လုပ်ပါဦးကမရယ်။ ငါဘာမှလည်း မစားရသေးဘူး ဝိတ်က ချက်ချင်းတက်သွားတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အဟင့်။ အိုပါးမရှိတဲ့ဘဝမှာ ဒီလိုပရမ်းပတာတွေ ဖြစ်နေပြီ အိုပါးရဲ့။’
မဆီမဆိုင် အိုပါးကိုတ,ပြီး ငိုနေလိုက်တာ။ “ဒီမှာ အယ်မ… အယ်မ ဒီလိုမျိုးဝိတ်တက်တာ အိုပါးကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အယ်မကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူနေတာပါနော်” ဆိုတဲ့ တစ်ခွန်းပဲ ကိုယ့်မှာ ပြောနိုင်တော့တယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့…
Related Article >>> ကိုယ်အခုမ,နေတဲ့အလေးတွေက ကိုယ့်အတွက် တကယ်ကိုဂိတ်ဆုံးအလေးတွေလား?
Emotional Eating (စိတ်ညစ်တိုင်းအစားစွတ်စားခြင်း) ဆိုတာ ယောင်းတို့ရဲ့ ဝိတ်ကို အချိန်တစ်ခဏအတွင်းတက်စေတဲ့ အဓိကတရားခံပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်စိတ် ကကယောင်ကတမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုအစားအသောက်တွေကို စိတ်ဖြေရာတစ်ခုအနေနဲ့ စားလိုက်တာဟာ အထိန်းအကွပ်မရှိဘဲ ကိုယ်ထည့်သလောက်ဝင်နေမှာဖြစ်သလို ဦးနှောက်ကလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီး မြင်မြင်ရာ စားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးပဲဖြစ်နေမှာမို့ ဒီအစားအသောက်က ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်လား? ကိုယ်နဲ့တည့်ရဲ့လား စတာတွေကို စဉ်းစားတော့မှာ မဟုတ်ဘဲ စားချင်သလိုစားဖြစ်နေတော့ ချက်ချင်းလေထိုးသလို ဝ,လာပါလိမ့်မယ်နော်။
နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုက Emotional Eating ဆိုတာမျိုးသည် စိတ်ညစ်တဲ့အချိန် တစ်ခုတည်းတင် ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရမ်းထိန်းချုပ်လွန်းတဲ့လူတွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့။
အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် ဝိတ်ချနေလို့ ဟိုဟာမစားဘူး၊ ဒီဟာမစားဘူး၊ အရွက်ပြုတ်ပဲစားမယ်၊ ထမင်းနဲ့ဟင်းဆို အနံ့တောင်မရှူဘူး။ စသည်ဖြင့် အလွန်အကျူးဝိတ်ချတတ်တဲ့လူတွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရမ်းထိန်းချုပ်တဲ့လူတွေက သိစိတ်မှာတော့ သိပ်မသိသာပေမဲ့ မသိစိတ်ထဲမှာတော့ သူ့ရဲ့စားချင်စိတ်ကို အတင်းမျိုသိပ်ထားသမျှတွေက တဖြည်းဖြည်းစုလာပြီး နောက်ဆုံးပေါက်ထွက်လာတဲ့အခါ တခြားလူတွေထက် နှစ်ဆ၊ သုံးဆမက ပိုပြီးစားသောက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါကလည်း ကိုယ်အားထုတ်သမျှ တစ်ခဏလေးနဲ့ လုံးဝရေစုံမျောလိုက်ရသလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
Related Article >>> ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ကခုန်ပြီး ဝိတ်ချလို့ရတယ်ဆိုတာ Zumba အားကစားက သက်သေပါပဲ။
ကဲ ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်း? လွယ်လွယ်လေးပါနော်။ စိတ်ညစ်တိုင်း အစားစားတတ်တဲ့ ယောင်းလေးတွေကတော့ ကိုယ်တစ်ခုခုစိတ်ညစ်နေပြီလို့ ခံစားလာရတာနဲ့ (သေးသေးဖြစ်စေ၊ ကြီးကြီးဖြစ်စေ) အစားမဟုတ်တဲ့ တစ်ခုခုဘက်ကို အာရုံလွှဲလိုက်ပါ။ ဥပမာ- သီချင်းကို အကျယ်ကြီးအော်ဆိုလိုက်တာမျိုး၊ သီချင်းဖွင့်ပြီး ကခုန်လိုက်တာမျိုး စသည်ဖြင့် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အစားရှိတဲ့နေရာကို မျက်နှာတောင်မလှည့်မိပါစေနဲ့နော်။ နောက်ပြီး အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရမ်းထိန်းချုပ်လွန်းတဲ့ယောင်းတွေကို မှာချင်တာက ထိန်းချုပ်တာသည် အဖြေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးနော်။ နေ့စဉ်ပုံမှန်လေးပဲစားသောက်ပြီး စားတဲ့နေရာမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားတွေကို စားရင်အဆင်ပြေပါပြီ။
အချုပ်ပြောရရင် စိတ်ညစ်တိုင်း အစားကိုလှိမ့်မစားပါနဲ့။ ပိုလှအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ပါ။ ဝိတ်ကျချင်ဇောနဲ့လည်း အရမ်းကြီးဝိတ်မချပါနဲ့၊ အရမ်းကြီး အစားတွေ မရှောင်ပါနဲ့။ ပုံမှန်လေးပဲစားသောက်သွားပါလို့။
ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး လှပတဲ့ယောင်းယောင်းလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ကြပါစေရှင်။
ဖှတျမရ ဓားမဆုံးအကှကျတှေ ဖွဈကုနျမယျနျော… သိဘို့။
‘ငါ့အိုပါးရညျးစားရသှားပွီ အမလေး အဟငျ့ရှတျ’
အသံပွဲကွီးနဲ့အျောနလေို့ သူ့လကျထဲကိုကွညျ့လိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ဟငျ… အာလူးကွျောနှဈထုပျ၊ ရခေဲမုနျ့ဘူးကွီးတဈဘူးနဲ့ ကိုလာတဈဘူးကို ဘယျညာညှပျပွီး စိနျပွနေပွတှေယျနပေါ့လား။
‘ဟဲ့ နငျဘာကွညျ့တာလဲ။ ငါ ဒီမှာဝမျးနညျးလှနျးလို့ အစားနဲ့ဖွသေိမျ့နရေတာ’
သွျော အငျးပါပေါ့။ ခေါငျးတညိတျညိတျနဲ့ လုပျစရာရှိတာ ဆကျလုပျနတေဲ့အခြိနျ ရုတျတရကျ ‘အားးးးး’ ဆိုတဲ့ အသံနကျကွီးကွားလိုကျလို့ ပွေးကွညျ့တဲ့အခါ…
‘လုပျပါဦးကမရယျ။ ငါဘာမှလညျး မစားရသေးဘူး ဝိတျက ခကျြခငျြးတကျသှားတယျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ အဟငျ့။ အိုပါးမရှိတဲ့ဘဝမှာ ဒီလိုပရမျးပတာတှေ ဖွဈနပွေီ အိုပါးရဲ့။’
မဆီမဆိုငျ အိုပါးကိုတ,ပွီး ငိုနလေိုကျတာ။ “ဒီမှာ အယျမ… အယျမ ဒီလိုမြိုးဝိတျတကျတာ အိုပါးကွောငျ့မဟုတျဘဲ အယျမကိုယျတိုငျ ဖနျတီးယူနတောပါနျော” ဆိုတဲ့ တဈခှနျးပဲ ကိုယျ့မှာ ပွောနိုငျတော့တယျ။ အဲဒါကို ဘယျလိုချေါလဲဆိုတော့…
Related Article >>> ကိုယျအခုမ,နတေဲ့အလေးတှကေ ကိုယျ့အတှကျ တကယျကိုဂိတျဆုံးအလေးတှလေား?
Emotional Eating (စိတျညဈတိုငျးအစားစှတျစားခွငျး) ဆိုတာ ယောငျးတို့ရဲ့ ဝိတျကို အခြိနျတဈခဏအတှငျးတကျစတေဲ့ အဓိကတရားခံပါပဲ။ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျ့စိတျ ကကယောငျကတမျးဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ ဒီလိုအစားအသောကျတှကေို စိတျဖွရောတဈခုအနနေဲ့ စားလိုကျတာဟာ အထိနျးအကှပျမရှိဘဲ ကိုယျထညျ့သလောကျဝငျနမှောဖွဈသလို ဦးနှောကျကလညျး ထိနျးခြုပျနိုငျစှမျးမရှိနိုငျပါဘူး။ နောကျပွီး မွငျမွငျရာ စားမယျဆိုတဲ့ စိတျမြိုးပဲဖွဈနမှောမို့ ဒီအစားအသောကျက ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျလား? ကိုယျနဲ့တညျ့ရဲ့လား စတာတှကေို စဉျးစားတော့မှာ မဟုတျဘဲ စားခငျြသလိုစားဖွဈနတေော့ ခကျြခငျြးလထေိုးသလို ဝ,လာပါလိမျ့မယျနျော။
နောကျထပျထူးခွားတာတဈခုက Emotional Eating ဆိုတာမြိုးသညျ စိတျညဈတဲ့အခြိနျ တဈခုတညျးတငျ ဖွဈတာမြိုးမဟုတျဘဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အရမျးထိနျးခြုပျလှနျးတဲ့လူတှမှောလညျး ဖွဈတတျပါတယျတဲ့။
အနီးစပျဆုံးပွောရရငျ ဝိတျခနြလေို့ ဟိုဟာမစားဘူး၊ ဒီဟာမစားဘူး၊ အရှကျပွုတျပဲစားမယျ၊ ထမငျးနဲ့ဟငျးဆို အနံ့တောငျမရှူဘူး။ စသညျဖွငျ့ အလှနျအကြူးဝိတျခတြတျတဲ့လူတှမှောလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီလို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အရမျးထိနျးခြုပျတဲ့လူတှကေ သိစိတျမှာတော့ သိပျမသိသာပမေဲ့ မသိစိတျထဲမှာတော့ သူ့ရဲ့စားခငျြစိတျကို အတငျးမြိုသိပျထားသမြှတှကေ တဖွညျးဖွညျးစုလာပွီး နောကျဆုံးပေါကျထှကျလာတဲ့အခါ တခွားလူတှထေကျ နှဈဆ၊ သုံးဆမက ပိုပွီးစားသောကျတတျပါတယျ။ အဲဒါကလညျး ကိုယျအားထုတျသမြှ တဈခဏလေးနဲ့ လုံးဝရစေုံမြောလိုကျရသလို ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
Related Article >>> ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ ကခုနျပွီး ဝိတျခလြို့ရတယျဆိုတာ Zumba အားကစားက သကျသပေါပဲ။
ကဲ ဒီတော့ ဘယျလိုလုပျကွမတုနျး? လှယျလှယျလေးပါနျော။ စိတျညဈတိုငျး အစားစားတတျတဲ့ ယောငျးလေးတှကေတော့ ကိုယျတဈခုခုစိတျညဈနပွေီလို့ ခံစားလာရတာနဲ့ (သေးသေးဖွဈစေ၊ ကွီးကွီးဖွဈစေ) အစားမဟုတျတဲ့ တဈခုခုဘကျကို အာရုံလှဲလိုကျပါ။ ဥပမာ- သီခငျြးကို အကယျြကွီးအျောဆိုလိုကျတာမြိုး၊ သီခငျြးဖှငျ့ပွီး ကခုနျလိုကျတာမြိုး စသညျဖွငျ့ လုပျပေးသငျ့ပါတယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ အစားရှိတဲ့နရောကို မကျြနှာတောငျမလှညျ့မိပါစနေဲ့နျော။ နောကျပွီး အစားအသောကျနဲ့ ပတျသကျပွီး အရမျးထိနျးခြုပျလှနျးတဲ့ယောငျးတှကေို မှာခငျြတာက ထိနျးခြုပျတာသညျ အဖွလေုံးဝမဟုတျပါဘူးနျော။ နစေ့ဉျပုံမှနျလေးပဲစားသောကျပွီး စားတဲ့နရောမှာ ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့ အစားတှကေို စားရငျအဆငျပွပေါပွီ။
အခြုပျပွောရရငျ စိတျညဈတိုငျး အစားကိုလှိမျ့မစားပါနဲ့။ ပိုလှအောငျလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျလိုကျပါ။ ဝိတျကခြငျြဇောနဲ့လညျး အရမျးကွီးဝိတျမခပြါနဲ့၊ အရမျးကွီး အစားတှေ မရှောငျပါနဲ့။ ပုံမှနျလေးပဲစားသောကျသှားပါလို့။
ကနျြးမာကွံ့ခိုငျပွီး လှပတဲ့ယောငျးယောငျးလေးတှေ ဖွဈလာနိုငျကွပါစရှေငျ။
Tagged Body, Eating, emotional, Fitness, goal
Hnin Ei Oo
အလှအပ၊ ဖက်ရှင်၊ gym နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ၊ အချစ်ရေး စတဲ့ကဏ္ဍတွေကို အဓိကထားရေးတဲ့ စာရေးသူပေါက်စလေး တျောက်ပါ 😁 အခွီနဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးစာတွေကိုလည်း ဒဲ့တိုးတွေ ရေးတတ်ပါသေးတယ် 😛
လက်ပြင်ကုန်းတဲ့အကျင့်ကို ဖျောက်ပစ်နိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း (၄) ခု
Posted on May 28, 2019 August 5, 2019 Author Stella
တစ်နေ့ကိုမိနစ်(၂၀)အချိန်ပေးရုံနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးအချိုးညီညီအဆီကျသွားစေမယ့် နည်းလမ်း(၄)သွယ်
Posted on April 19, 2019 April 19, 2019 Author Yin Sandi Ko
ဝိတ်ကျပြီးတအားလှသွားရင် မင်မင်တို့ကို မမေ့ထားရဘူးနော်
ကိုယ်အခုမ,နေတဲ့အလေးတွေက ကိုယ့်အတွက် တကယ်ကိုဂိတ်ဆုံးအလေးတွေလား?
Posted on April 23, 2019 Author Hnin Ei Oo
ကိုယ့် Limit ရောက်နေပြီဆိုတာ သေချာပြီလား? ပြန်စဉ်းစားပါဦး…